Select Language አማርኛ - Amharic Bahasa Indonesia Čeština – Czech English Español - Spanish Français - French Polski - Polish Português - Portuguese русском - Russian বাংলা লিপি Bangla lipi 简体中文 - Simplified Chinese
पाठ १: अगुवाइ गर्ने र पछ्याउने मानिसहरू
परमेश्‍वर भक्त अगुवाहरूका कस्ता चरित्र हुन्छन् ? र परमेश्‍वरको योजनामा अगुवाको कस्तो स्थान रहन्छ ? यस पाठमा हामी बाइबलमा परमेश्‍वरका छानिएका अगुवाहरू र विभिन्‍न जीवन परिस्थितिहरूमा अगुवापनका बारेमा सिक्‍नेछौँ ।
पाठ २: अगुवाहरू मानिसहरूप्रति कृतज्ञ हुन्छन्
यस पाठमा हामी मानव सम्बन्धहरूका केही सिद्धान्तहरूलाई अध्ययन गर्नेछौँ र असल नेतृत्वका लागि मानिसहरूका बारेमा हामीमा भएको भावना महत्वपूर्ण छ भन्‍ने कुरा हामी पत्ता लगाउनेछौँ ।
पाठ ३: अगुवाहरू वृद्धि हुन्छन् र वृद्धि हुनका लागि अरूहरूलाई सहयोग गर्छन्
यस पाठमा हामी परमेश्‍वरको मण्डली र अनन्तताको निम्ति उहाँको योजनाको संलग्‍नताको बारेका केही बाइबललीय उदाहरणहरू र सिद्धान्तहरूलाई विचार गर्नेछौँ जसले हामीलाई यस सम्बन्धमा स्पष्‍ट पार्नेछन् । ख्रीष्‍टियान अगुवाहरूका रूपमा हाम्रो आफ्नै वृद्धि र विकासको बारेमा पनि हामी अझै सिक्‍नेछौँ ।
पाठ ४: अगुवाहरूले योजना बनाउँछन् र संगठन गर्छन्
यस पाठमा हामी राजा दाऊदको अगुवापनको उदाहरणको अध्ययन गरी आधुनिक अगुवापनमा हामीले सिकेका कुरालाई प्रयोग गर्नेछौँ । योजनाहरूलाई कसरी रूपरेखित गर्ने र विशेष परियोजनाहरूका निम्ति कार्यतालिकालाई कसरी तयार गर्ने भन्‍ने बारेमा पनि हामी सिक्‍नेछौँ ।
पाठ ५: अगुवाहरूले सञ्‍चार गर्छन्
अगुवाहरूले एक अर्कासँग कसरी सञ्‍चार गर्छन् भन्‍ने कुरा यहोशूको बाइबलीय विवरणले देखाउँछ । उनको उदाहरणद्वारा हामीले सञ्‍चारका महत्वपूर्ण सिद्धान्तहरू र अगुवाका रूपमा हामीले कसरी सुन्‍ने भन्‍ने बारेमा सिक्‍नेछौँ।
पाठ ६: अगुवाहरूले समस्याहरू समाधान गर्छन् र निर्णयहरू बनाउँछन्
यस पाठमा हामी महान् अगुवा नहेम्याहका तरीकाहरूलाई विचार गर्नेछौँ । कसरी समस्याहरू समाधान गर्ने र निर्णयहरू बनाउने विषयमा उनीबाट र आधुनिक विद्वानहरूबाट हामी सिक्‍नेछौँ ।
पाठ ७: अगुवाहरूले जिम्मेवारीहरू बहन गर्छन्
हामीले उद्देश्यहरू र लक्ष्यहरूको महत्व र स्वभावलाई बुझ्नका लागि सिक्‍नु आवश्यक छ । ती प्राप्‍त गर्नका लागि पनि जिम्मेवारी स्वीकार गर्न हामी इच्छुक हुनुपर्छ । यी सिद्धान्तहरूका जाँचमा हामीलाई अगुवाइ गर्ने बाइबल विवरणचाहिँ एस्तरको अध्ययन हो ।
पाठ ८: अगुवाहरूले उद्देश्य प्राप्‍तिका लागि काम गर्छन्
उद्देश्यसाथ अगुवा हुनका लागि, हामीले मण्डलीको प्रक्रियालाई र परमेश्‍वरले हामीलाई दिनुभएका लक्ष्यहरूलाई प्राप्‍त गर्न कसरी योगदान गर्ने भन्‍ने बारेमा बुझ्नुपर्छ ।
पाठ ९: अगुवाहरू उत्प्रेरित हुन्छन् र अरूहरूलाई उत्प्रेरणा दिन्छन्
उत्प्रेरणाचाहिँ असल नेतृत्वपनको निम्ति साँचो हो । अगुवाहरू र अनुयायीहरू दुवैका निम्ति । स्थापित भएका उद्देश्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि सहयोग गर्न के कुरालाई मानिसहरूलाई उत्प्रेरणा दिन्छ सो बुझ्न अति नै महत्वपूर्ण छ ।